महिलाको चर’म सन्तुष्टीका लागि पुरूषले बुझ्नुपर्ने कुरा
महिला आफ्ना पतिसँग दिनहुँ यौ’न सम्बन्ध राख्न इच्छुक हुँदैनन् । यसो हुनुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण यौ’न साथी आफूभन्दा पहिले चर’म आ’नन्दसम्म पुग्नु
तपाईं यौ’न आनन्दको अन्तिम खुडकिलोसम्म पुग्न असफल भइरहनुभएको छ ? च’रम आनन्द (अ’र्गाज्म) भन्दा अघि नै चिसिनुहुन्छ ? अमेरिकामा गरिएको अनुसन्धानअनुसार महिलाले चाहे हरेक पटक च’रम सुख उठाउन सक्छन् ।त्यसको लागि धैर्यता र यौ’नसाथी बीच उचित तालमेल हुनु जरुरी छ ।
के साँचो हो भने पुरुष बिनाकुनै समस्या हरेक पटक चर’म आनन्दसम्म पुग्छन्, महिलालाई भने समय लाग्छ । कतिपय अवस्थामा महिला आफ्ना पतिसँग दिनहुँ यौ’न सम्बन्ध राख्न इच्छुक हुँदैनन् । यसो हुनुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण यौ’न साथी आफूभन्दा पहिले चर’म आ’नन्दसम्म पुग्नु पनि हो ।
यस्तो हुँदा कम उमेरका युवतीमा आफूमा केही कमी रहेको भ्रमले डेरा जमाउन थाल्छ, उमेरको साढे तीन दशक पार गरेका महिला भने आफूमा यौ’न भावना घटदै गएको सोच्न थाल्छन् । उक्त अनुसन्धानले हरेक पटक महिलाले च’रम सुख लिन सक्ने देखाएको छ । तर ग’र्भधारणका लागि च’रम आनन्द प्राप्त गर्नु आवश्यक नभएकाले चिकित्सकसमेत यो कुरालाई बढी महत्त्व दिँदैनन् ।
महिलाले चर’म सुख प्राप्त गर्ने प्रसंगमा पुरुष साथीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने अनुसन्धानमा उल्लेख छ । पुरुष साथीले महिला साथीलाई महत्त्व दिने बानी गरे उनीहरू च*रम आ’नन्दतिर सहजै जान सक्छन्